Posted by Tranquillus | Sep 19, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xisaabta keydku waa mid ka mid ah faa'iidooyinka uu shaqaale uga faa'iideysan karo shirkad. Tani waa nooc ballanqaad ah oo loo shaqeeyaha u siiyo shaqaalihiisa si loogu oggolaado inay ku raaxaystaan ​​maalmahooda fasaxa oo ay ku nastaan ​​aan hadhow la qaadan. Si looga takhaluso, qaababka qaarkood waa in la raaco codsiguna waa qasab. Halkan ka dib waa warqado muunad ah oo loogu talagalay isticmaalka akoonka keydinta waqtiga. Laakiin marka hore, fikradaha qaarkood ee ku saabsan faa'iidadan had iyo jeer waxay noqon doonaan kuwo waxtar leh.
Waa maxay xisaabta keydka waqtiga?
Xisaabta keydinta waqtiga ama CET waa nidaam ay dejisay shirkad si ay uga faa'iideysato shaqaalaheeda si loogu oggolaado inay uga faa'iideystaan ​​uruurinta xuquuqda fasaxa mushaharka. Kuwaas ayaa markaa la codsan karaa goor dambe, ha ahaato maalmo gudahood ama qaab mushahar ah oo shaqaaluhu ugu shubi karo koontada keydinta waqtiga.
Si kastaba ha noqotee, dejinta koontada waqtiga keydinta waxay ka dhalataa heshiis ama heshiis wadareed. Heshiiskan ayaa markaa dejin doona shuruudaha keenista iyo isticmaalka CET sida ku xusanmaqaalka L3151-1 ee Xeerka Shaqaalaha. Sidaas darteed shaqaaluhu wuxuu u adeegsan karaa inuu ku soo ururiyo xuquuqdiisa fasaxa ee aan la qaadin isagoo codsi u diraya loo shaqeeyaha.
Maxay yihiin faa'iidooyinka akoonka keydinta waqtiga?
Faa'iidooyinka akoonka keydinta waqtiga waxay u noqon karaan loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha.
Faa'iidooyinka loo shaqeeyaha
Dejinta koonto waqti kayd ah ayaa suurtagal ka dhigaysa in la yareeyo faa'iidooyinka la canshuuro ee shirkadda iyadoo lagu mahadinayo ka qayb qaadashada maalmaha lagu gudbiyay CET. Tan dambe waxay sidoo kale u oggolaanaysaa loo-shaqeeyaha inuu ku dhiirrigeliyo kuna haysto shaqaalaha isagoo u oggolaanaya inay uga faa'iideystaan ​​xaaladaha iyadoo loo eegayo baahidooda.
Faa'iidooyinka qofka shaqaalaha ah
CET guud ahaan wuxuu u oggol yahay shaqaalaha inuu ka faa'iideysto qorshaha keydka hawlgabka xuquuqdiisa fasaxa. Waxaa sidoo kale laga dhaafi karaa canshuurta faa'iidada raasumaalka, maalgelinta joojinta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah,
Sidee loo sameeyaa xisaab kaydinta waqtiga?
Xisaabta waqtiga keydinta waxaa lagu dejin karaa iyadoo lagu saleynayo heshiis shirkadeed ama heshiis ama heshiis ama heshiis laan. Marka, heshiiskan ama heshiiskan, loo shaqeeyaha waa inuu kala xaajoodaa xeerarka xukuma xisaabta keydinta waqtiga.
Wadaxaajoodyadu waxay si gaar ah u khuseeyaan shuruudaha maaraynta koontada, shuruudaha maalgelinta koontada iyo shuruudaha isticmaalka xisaabta keydka waqtiga.
Sidee loo maalgeliyaa loona isticmaalaa koontada waqtiga kaydinta?
Akoonka keydinta waqtiga waxaa lagu maalgelin karaa waqti ahaan ama lacag ahaan. Xuquuqda keydsan ayaa la isticmaali karaa wakhti kasta. Si kastaba ha noqotee, keenista CET waxay u baahan tahay codsi loo-shaqeeyaha iyada oo la raacayo in qodobbada la ixtiraamo.
CET waxaa lagu maalgelin karaa fasax la helay usbuuca shanaad, nasasho magdhow ah, waqti dheeraad ah ama RTT oo loogu talagalay shaqaalaha qiimaha go'an. Waxaas oo dhan si loo saadaaliyo hawlgabnimada, si loo maalgeliyo maalmaha mushahar la'aanta ama si tartiib tartiib ah loogu beddelo shaqo waqti dhiman ah.
Qaab lacag ah
Shaqaaluhu wuxuu si hufan uga faa'iideysan karaa xuquuqdiisa fasaxa qaab lacag ah. Marka laga hadlayo tan dambe, waxaa jira tabaruca loo shaqeeyaha, kordhinta mushaaraadka, gunnooyinka kala duwan, gunooyinka, keydka lagu sameeyay PEE. Si kastaba ha noqotee, fasax sannadeed looma beddeli karo lacag.
READ Ka mamnuuco khaladaadka higgaadinta shaqada
Adoo dooranaya xulashadan, shaqaaluhu wuxuu ka faa'iideysan karaa dakhli dheeri ah. Wuxuu sidoo kale u wareejin karaa PEE-ga ama PERCO-kiisa si uu u maalgeliyo qorshaha keydka shirkadda ama qorshaha hawlgabka kooxeed.
Moodooyinka qaarkood ee waraaqaha codsanaya isticmaalka koontada keydinta waqtiga
Waa kuwan qaar ka mid ah waraaqaha tusaalaha ah si ay kaaga caawiyaan inaad ka codsato maalgelinta CET fasaxyada la bixiyo, gunnooyinka ama RTT-yada iyo codsi ah inaad isticmaasho koonto keyd ah waqtiga.
Maalgelinta akoonka keydinta waqtiga
(Magaalada), taariikhda (Taariikhda)
Ujeeddo: Maalgelinta akoonkeyga keydinta waqtiga
Sida ku xusan qoraalka naloo soo sheegay oo ku taariikheysan [taariikhda xusuus-qorista], waxaad ka codsatay dhammaan shaqaalaha inay ka faa'iideystaan ​​fasax sannadeedka miisaaniyad ka hor inta aan la gaarin [waqtiga ugu dambeeya ee bixinta fasaxa].
Intaas waxaa sii dheer, sababta oo ah bixitaanka fasaxa shaqaalaha qaarkood iyo si loo hubiyo habsami u socodka shirkadda, sidaa darteed ma awoodo inaan qaato inta ka hartay fasaxa aan qaatay, ee ah [tirada maalmaha fasaxa ah mushahar ahaan u hadhay] maalmood.
Si kastaba ha noqotee, sida ku cad qodobka L3151-1 ee Xeerka Shaqada, waxaa la xusay inaan ka faa'iideysan karo fasaxyadan la bixiyay qaab lacageed. Sidaa darteed, waxaan u qaatay xorriyadda qorista halkan si aan kaaga codsado bixinta isu-dheellitirka u dhigma ciidahan koontadayda wakhtigayga.
Inta aan kaa sugayo jawaab wanaagsan, fadlan aqbal, Mudane, dareenka tixgelinta ugu sareysa.
Adeegsiga xuquuqaha loo qoondeeyay koontada waqtiga lagu keydsado
Mawduuca: Adeegsiga koontada waqtigeyga
Dhawr sano ayaa laga joogaa tan iyo markii la sameeyay xisaabteyda keydinta waqtigeyga. Marka, waxaan awooday inaan ururiyo [qaddarka dheelitirka ee CET] euro, oo u dhiganta [tirada maalmaha fasaxa ee aan la qaadan] maalmo fasax ah.
Halkan, iyo sida ku xusan qodobka L3151-3 ee Xeerka Shaqaalaha, waxaan jeclaan lahaa inaan kugu wargeliyo rabitaankeyga ah inaan maalgeliyo mashruuc ka socda urur samafal oo ka socda xuquuqdaydii aan ku helay koontadayda waqtiga.
Waad ku mahadsan tahay sida ugu dhaqsaha badan ee aad u samaysay waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuugu jiraa wixii macluumaad dheeraad ah.
Fadlan aamin, Mudane Agaasime, salaan diiran.
Soo deji "Maalgelinta Koontada kaydka wakhtiga"	Food-account-savings-time.docx - La soo dejiyay 945 jeer - 13 KB
Soo deji "qaabka warqadda xisaabta wakhtiga kaydka"	model-of-letter-of-account-savings-time.docx – La soo dejiyay 1038 jeer – 22 KB
Waraaqda xisaabta keydinta waqtiga si aad u soo dejiso Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeSamee warqad codsi ah Dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah
socdaWaxtarla'aanta joojinta heshiiska iyadoo maqnaanshaha nuqul la gaarsiinayo shaqaalaha